Somaliland.Org » Ceebeey Tacaal Aanadii Nageeye
OPINIONCeebeey Tacaal Aanadii Nageeye
May 29th, 2008 Comments Off CEEBEEY TACAAL AANADII NAGEEYE
Dhaqankiisa kii dilay
Diintiina baal maray Dad miyuu u tudhaya?
Ummad waliba waxay hoodo iyo ayaan ku leedahay dhaqan suubban iyo akhlaaq aan dabciga dad ahaaneed guud marayn. Dadkuna waxay jecel yihiin in ay marka ay dhaqan kooda iyo diintoodu ay meel wada kulmiso in ay u xagliyaan diinta ay aaminsan yihiin. Ayaga oo aan dhaqankana baal marayn. Burbur, dhac, dil iyo dhagxumo kasto oo ay kulansadaan ummad waynta Soomaaliyeed waa mid aan marnaba suurtagal noqon doonin in ay lumiyaan dhaqankii iyo diintii ay aamin sanaayeen.
Haddaba buugaag badan oo af Soomaali lagu qoray oo aan akhriyey mid waliba heerku doona ha gaadhsiisnaade ma uu noqon mid jidhka iyo xubnaha oo dhammi ka dubaaxiyaan. Buugga la yidhaa AANADII NAGEEYE markasta oo aan soo xasuusto wuxuu noqday mid igu reebay argagax, murugo iyo baqo aan ka qabo mustaqbalka halka ay ummadda aanu dhaqanka wada wadaagna ay ku danbayn doonto. Haddana waxaan is waydiiyey waar buuggani ma adiga ayuunbaa akhriyey mise dadku fikradda buugga uu ku qoran yahay waa ay la dhacsan yihiin. Waxaan raadiyay dhammaan qoraalladii laga qoray, nasiib wanaag ku guulaystay ee maxaa igaga soo baxay. Tii aan ka akhriyey mid kasii dhiillo xun.
Aniga oo marwalba dhiirrigeliya in wax la qoro, in wax la qoraana ay tahay mid imaka innagu cusub ayaa haddana buuggani dhantaalay habkii qoraaga ee ummadeennu lahayd. Dhabar jab wayna ku riday in badan oo laab la kac ku ahaa qoraalku.
Waxaa kale oo murugo iyo ciil kugu dilaya marka aad xayaysiiska buugga aad aragto ee la leeyahay waxaa daabacday shirkad Soomaaliyeed oo aad odhanaysaa iyana miyay la qabaan dhacdada dabciga iyo anshaxa meesha kaga dhacaysa. Mise dhaqankii way iibsadeen oo lacag ayaa u gashay.
Waxaa ila soo gudboonaaday kaalinta shakhsi ahaan igaga aaddan marka ay dhacdo shee